Plateau Steeti: 'Baba oyoyo' ọ pụtara Buhari bịa chịa anyị ọzọ? - BBC News Ìgbò
Plateau Steeti: 'Baba oyoyo' ọ pụtara Buhari bịa chịa anyị ọzọ?
Image copyright @bashirahmed.
Nkenke aha onyonyo Muhammadụ Buhari kpọpere trakụtọ nari anọ oge o mere njem na Plateau steeti
Ndị mmadụ nupụtara n'igwe ịnabata onyeisiala bụ Muhammed Buharị oge ọ gara njem nleta na Plateau steeti na nsonso.
Ọtụtụ ha pụtara n'ezi dị n'ụzọ ebe ewumewu ndị Buhari gara imepe dị na-eti, 'Baba oyoyo,' na-efere ya aka.
Agwa ha kpasara Buhari tụrụ ọtụtụ ndị mmadụ na anya dịka e nwerela ọtụtụ ndị ọnụ na-eru na okwu dịka Olusegun Obasanjo na Ibrahim Babangida na Naijiria ndị katọrọ Buhari maka etu akụnaụba na nchekwa ala Naijiria siri kụọ afọ n'ala, ma gwa ya ka ọ hapụ ịzọ ọchịchị ọzọ n' afọ 2019.
Mana ụdị nnabata e nyere ya na Plateau steeti palitere ndọrịtaụka n'etiti ndị mmadụ. Ndị hụrụ Buhari n'anya na-ekwu na ogosiri na Buhari ka bụ mmadụ oha, onye a hụrụ na-anya nke ukwu nke na ọ zọ ọkwa ọchịchị na afọ 2019, a ga-atụnyere ya akwụkwọ.
Ha sị na o nwere ezi ohere inweta ọkwa onyeisiala ọzọ.
Lee ihe ndị hụrụ Buhari n'anya na-ekwu n'igwe okwu Twitter:
Mana ndị ọzọ na-ekwu na ịpụta n'ụzọ na-eti mkpu,efe aka abụghị ụzọ e ji ama onye ọha hụrụ n'anya, kama ọ bụ ntụliaka ga-ekwu onye bụ onye.
Nwafọ Igbo ma bụrụkwa onye otu pati UPP bụ Chekwas Okorie sịrị na ihe ọtụtụ ndị mmadụ ji pụta bụ na ndị mmadụ na-apụtakarị ịbịa hụ ndị ọchịchị.
O kwukwara na e nwe ọbịa pụrụiche, na gọọmenti ụfọdụ na-emechi ahia, ụlọakwụkwọ na ụlọọrụ.
Uhuru Kenyatta na Raila Odinga ekpeziela
Gọọmenti ga-egbubilata osikapa a na-ebubata
Okorie gara n'hu kwuo na nke a apụtaghị na onye ahụ ga-emerị na ntuliaka.
" Ọ bụghị ikwụ n'ụzọ na-efe aka ka a ga-eji mara onye a ga-etinyere akwụkwọ na ntụliaka, ọ bụ nkwa e kwere ekwe nke e meghị ka a ga-atụle."
Ndị na-agba mbọ ka ndị mmadụ nweta ikike dịrị ha kwenyere n'ihe Okorie kwuru.
Otu onye n'ime ha bụ Jude Ohanele sị na ndị na-apụtakarị ma ndị ọchịchị bịa njem bụ ndị enweghị ọrụ.
"Onye ọbụla bụ onye ọchịchị gara n'obodo dịka Naijiria obodo ndị mmadụ na-enweghị ọrụ, ndị mmadụ ga-apụta. Ọ bụrụ na ndị mmadụ nwere ọrụ, ha agaghị apụta. Oke ndị mmadụ pụtaranụ na-egosi ndị anamachọọrụ."
David Anyaele kwuru na ọ bụ n'oge ntuliaka ka e ji ama onye ọha hụrụ n'anya n'ezie.
N'okwu ya, "Agaghị eji etu ndị mmadụ siri gbapụta kele onye ọchịchị mara onye ga-atunyere ya n'ihi na ihe ndị a niile e nwere ike ịzụta ha n'ahịa."
2019: Buhari ekwuola na ya ekpebibeghị ịzọ ọchịchị
23 Febrụwarị 2018
Buhari: Kedu ka Ị ga-esi nyere Naijiria aka?
19 Febrụwarị 2018
Gịnị ka ị kwesịrị ịma maka Christine Lagarde ka ọ na-apụ IMF?
'Mgbe ihe dị mma ana m enweta N2000'